अरिंगालको व्यापारबाट मनग्य आम्दानी ! - Everest Dainik - News from Nepal
अरिंगालको व्यापारबाट मनग्य आम्दानी !
पाल्पा, मंसिर १७ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–४, भैरवस्थानका गम्भीर आलेले अरिङ्गालको व्यापार गछर्नभन्दा अनौठो मान्नु पर्दैन । विगत ६ वर्षदेखि उनले होटल रुपटपमा अरिङ्गालको ‘फ्राई’ बेच्दै आएका छन् । अरिङ्गालको व्यापार गरेरै आलेले यस याममा रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरे ।
अरिङ्गालको परिकार निकै स्वादिलो हुन्छ । होटलमा अरिङ्गालको परिकार चाख्नका लागि ग्राहकको भीड लाग्छ । यही व्यापारबाट उनले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । “यस वर्ष अरिङ्गालले गोलो कम लगाएपछि आम्दानीमा कमी आयो,” उनले भने ।
याे पनि पढ्नुस भत्ताको चेक बोकेर हिँडेका वडा सचिव गायव
गत वर्ष रु एक लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी भएको उनको भनाइ छ । अरिङ्गालको गोलोलाई निकै जोखिम मोलेर पोल्नुपर्ने हुन्छ ।
होटलमा ग्राहकले अरिङ्गालको परिकार बढी रुचाउने गरेका छन् । प्रतिकिलो अरिङ्गाल रु एक हजार २०० मा खरीद हुन्छ । आलेले एक प्लेट अरिङ्गालको परिकारलाई रु २५० मा बिक्री गर्छन् । “ग्राहकको माग पूरा गर्न सकेका छैनौँ,” उनले भने । अरिङ्गालको परिकारले औषधिको काम गर्छ । सदरमुकाम तानसेन, पोखरा, काठमाडौं, तम्घास, बुटवललगायत ठाउँबाट अरिङ्गालको माग हुँदै आएको छ ।
रिब्दीकोट गाउँपालिका–४, भारकोटका ज्ञानबहादुर आलेले हालसम्म १८÷१९ अरिङ्गालको गोला पोलेको बताउनुभयो । भैरवस्थानमा प्रतिकिलो अरिङ्गाललाई रु एक हजार २०० र तानसेनमा रु एक हजार रु ५०० मा बिक्री हुन्छ । अग्ला रुखमा अरिङगालले गोलो लगाउने भएकाले पोल्न समस्या हुन्छ । रासस
याे पनि पढ्नुस पाल्पा बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर
ट्याग्स: Aringal, palpa